Talinayo Video Qaabka iyo Settings u Fiiro Galaxy 3
> Resource > Samsung > talinayo Video qaabab Galaxy Note 3
Sidee baa nin keliya is-hor taagi kara si aad u daawato ama Radidiyaha wax videos ay Note Galaxy 3? Waxaa ka ciyaari kara ilaa 13 saacadood iyadoo u kordhiyay batariga ee 3200mAh, taas oo hadhid badan marka la barbar dhigo noocyada kale ama lagu daydo ee casriga ah. Size screen ayaa sidoo kale intii lagu kaydiyo waa ka sii yididiilo leh ee ku caashaqay movie. Sida ay aniga ila yeeran doona, Ogow Galaxy 3 waa tan casriga ah in ay awoodaan in ay Radidiyaha noocyada file ugu soo baxay oo ka mid ah kuwa loogu jecel yahay oo caadi ah. Fadlan sii akhriyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Qeybta 1: taageerayaan qaabab File u Fiiro Galaxy 3
Qeybta 2: Best Video Meeshay u Fiiro Galaxy 3
Qeybta 3: horena Video Settings u Fiiro Galaxy 3
MP4, M4V, 3GP, wmv, ASF, AVI, FLV, MKV iyo WEBM
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, regelingen, WMA, Amr, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX iyo Ota
Fadlan raac HALKAN wixii faahfaahin dheeraad ah oo la gelin doono codices kala ah in la jaanqaadaan qalabka.
Iska fiiri video ah goob ugu fiican ee aad videos si loo hubiyo in si fudud, tayo sare leh-oo loo maqli xiiso leh oo ku saabsan Fiiro aad Galaxy 3.
Qaraarka: 960 * 640
Inkasta oo waxaa la sheegay in Samsung in qalabka uu noqon doono socon kara iyo in ay taageeraan qaabab file ku qoran Qaybta 1aad, ma ahan lagama maarmaan kiiska. Waa mid aad u niyad-jab marka aad hoos laygaga dejiyey garoonka daqiiqadii ugu dambaysa ka dib markii gujinaya ka PLAY button iyo is keentay in la fariin qalad ah. Isku day inaad hesho qabsaday ah naftaada iyo HA tirtirto videos xaqa weli!
The Wondershare Video Converter Ultimate awoodi doontaa inaan ku saxno kuu baxo. Si fudud u dhan Chuck ee ha badalo aad video files idinku sugan yaalla. Waxa ay noqon doontaa oo dhan samaysay iyo Bosnia markii aad ku soo laabtay ka dib markii kafeega deg deg ah ama socod dego.
Halkii tafatirka, duuban ama gubasho aad videos gal DVD isticmaalaya software badan, waxaas wada samayn karaa oo keliya mid ka mid keli ah Wondershare ka Video Converter Ultimate madal. Waxa kale oo la jaan qaada, waayo, PC aad Windows iyo Mac labada hawlgala. Isku day inaad ka soo naftaada.
Waxa ay noqon doontaa wax aad looga xumaado in ka badan marka aad leedahay inay ku qor in aad naftaada goobaha video ka dib markii loo keenay in la fariin qalad ah in qaab video aad aan la taageeray. Sidaa awgeed, waa in ka badan xaddi ah marka ay ku horena u ah laguugu sahlo, sida ay Wondershare Video Converter Ultimate .
All inaad samayso waa doorato noocyada ama model ah qalab aad ka dhisay-in horena oo si toos ah loogu badalo doonaa video files si loo waafajiyo goobta loo maqli karo ugu fiican sida ku xusan Qeybta 2. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo kale, si fudud u maraan naga khayraadka qaybta ama aad la xiriirto la Support 's kooxda.